News – Candle Myanmar
အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို လက်တွဲလုပ်ဆောင်မည်ဟု ကေအဲန်ယူ ထုတ်ပြန် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမဆို လက်တွဲပြီး အာဏာရှင်စနစ်အားလုံးကို ဆန့်ကျင် တော်လှန်သွားမည်ဟု ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးက ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာလ ၃ရက်နေ့စွဲဖြင့် သဘောထားရပ်တည်ချက်တစ်စောင်
ကျနော်တို့ ကရင်ပြည်နယ်လေးမှာပေါ့ဗျာ မင်းမကောင်းတော့ ပြည်သူတွေခံရတာ ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ ဇမိမြစ် မိုးကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွား ကျနော်တို့ ကရင်ပြည်နယ်လေးမှာပေါ့ဗျာ မင်းမကောင်းတော့ ပြည်သူတွေခံရတာ ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ ဇမိမြစ် မိုးကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွား
သူတော်ကောင်းအမေစုကျန်းမာပါစေ ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ အမေစု အောက်ဆီဂျင်ကျနေ ဟုသတင်းများထွက်နေ ဗီဒီယိုဖိုင်အားအောက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်.. အမေစု နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာကြားကြပါသလဲ။ အောက်ဆီဂျင်ကျနေတယ် ကြားမိလို့ပါ။သူတော်ကောင်းအမေစုကျန်းမာပါစေ။ source Myo Yan Naung Thein အမေစု အောက်ဆီဂျင်ကျနေ ဟုသတင်းများထွက်နေ အမေစု
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီမီးတောက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ပိုးစိုးပက်စက် ကူးစက်လောင်ကျွမ်းလေပြီ။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီမီးတောက်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ပိုးစိုးပက်စက် ကူးစက်လောင်ကျွမ်းလေပြီ။ တနေ့တစ်ခြား ပြင်းထန်လာသည့် လူထုအုံကြွမှုတွေနှင့်အတူ ထိုင်းစစ်အာဏာရှင်တို့လည်း တိုင်ပတ်နေပါပြီ။ မကြာမီကာလအတွင်း အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံအသီးသီးဆီသို့ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းရာမှတဆင့် ချီးနားဆီကိုပါ မလွဲမသွေ ကူးစက်မှာ သေချာသလောက်ပင်။ ချီးနားအကြောက်ဆုံးကဒီရောဂါပါပဲ။ ချီးနားလက်ရှိကြုံတွေ့နေရသည့် ကပ်ဘေးကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။ လက်ရှိမြန်မာ့အရေး မကြာမီအောင်မြင်သွားလျှင် နိုင်ငံအသီးသီးအတွက် အရှိန်အဟုန်ပြင်းလာပြီး
အင်းစိန် ထောင်တွင်း ဆန္ဒပြသူများ အချက်သုံးချက်တောင်းဆို
အင်းစိန် ထောင်တွင်း ဆန္ဒပြသူများ အချက်သုံးချက်တောင်းဆို ဇူလိုင် ၂၃ ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ ၁၀ နာရီကြား အင်းစိန်ထောင်တွင်း ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူများက အချက်သုံးချက်တောင်းဆိုထားကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူများကို ဥပဒေအရ ကူညီပေးနေသည့် ရှေ့နေများက
ပါကစ္စတန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အသတ်ခံရလို့ တရုတ်အစိုးရ ဒေါသထွက်နေ
ပါကစ္စတန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ အသတ်ခံရလို့ တရုတ်အစိုးရ ဒေါသထွက်နေ ပါကစ္စတန်မှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရလို့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေသေဆုံးမှုကို စုံစမ်းဖို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့စေလွှတ်မယ်လို့ တရုတ်အမျိုုးသားလုံခြုံရေးဝန်ကြီ းZhao Kezhi က မနေ့က ပြောပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ တရုတ်သမ္မတ Xi Jinping ကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားတာလို့ သူကပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ 🔸စစ်သည်တော် ကျင့်ဝတ် စည်းမျဥ်းများ🔸 (Soldier’s Rules) (၁) စစ်ရေးရည်မှန်းချက်များဖြင့်သာ တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမည်။ (၂) စစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော အင်အားကိုသာ အသုံးပြု၍ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။ (၃) အရပ်သားပြည်သူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမည်။
စစ်တပ်ပိုင် ကန်သာယာဆေးရုံမှ ဝန်ထမ်းများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ကိုဗစ်ကူးစက်
ရန်ကုန်မြို့ အင်ယားကန်စောင်းရှိ ကန်သာယာဆေးရုံမှ ဝန်ထမ်း ၃၅ဦးတွင် ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရကြောင်း အဆိုပါဆေးရုံမှဝန်ထမ်းများအပြောအရ သိရသည်။ ကန်သာယာဆေးရုံမှာ လက်ရှိ ဝန်ထမ်း၂၀၀ဦး ခန့်ရှိပြီး ကူးစက်ခံရသူများတွင် သူနာပြုဌာန ၊ ငွေစာရင်းဌာန၊ ဧည့်ကြိုဌာန၊ အရေးပေါ်ဌာနနှင့် ဆေးဆိုင်တို့မှဝန်ထမ်းများ အများဆုံးပါဝင်သည်ဟု သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်။ ဇူလိုင်လ အစပိုင်းတွင် ဆေးရုံဝန်ထမ်းကြိုပို့ကားမောင်းသူ ခုနှစ်ဦးတွင်
ကလေးမြို့တွင် ဒီနေ့ စစ်တပ်လေယာဉ် ၃ ကြိမ်ဆင်းသက်
ခရီးသည်လေယာဉ်တွေရပ်နားထားတဲ့ ကလေးမြို့လေဆိပ်မှာ ဒီနေ့ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်တွင် စစ်တပ်သုံးလေယာဉ် ၃ ကြိမ်ဆင်းသက်သွားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ယင်းလေယာဉ်ဟာ စစ်တပ်သုံး အရပ်ဖက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး ဒီမနက် ၉ နာရီခန့်တွင် တကြိမ်၊ နေ့လည် ၁ နာရီခန့်တွင် တကြိမ်၊ ညနေ ၅ နာရီတွင်
စစ်သူပုန်ကို US ဒရုန်းစာ ကျွေးတော့မလား …?
ထိုင်ဝမ်ကို နည်းပညာပစ္စည်းများပို့အပြီးမှာ… အာရှဖစိဖိတ်သမုဒ္ဒ ရာထဲမှာရှိတဲ့… သူတို့ရဲ့…စစ်ဆင်းရေးစခန်းကို…. နောက်ဆုံးပေါ်ကိုပျောက်လေယာဥ်… လေးပုံတပုံကို ပို့ထားခဲ့လိုက်တယ်…. နိုင်ငံ(3)နိုင်ငံမှာရှိတဲ့…စစ်သည်များကို ပြန်ခေါ်ထားပြီး…အားမွေးထားစေခဲ့ပါပြီ… သူတို့ရဲ့ စစ်သင်္ဘောတွေကို တခါးမရှိ ဓားမရှိ ဝင်ထွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးထားသည့်… စလုံးက…မြန်မာပြည်ရောက်နေသည့် သူ့နိုင်ငံသားတွေကို အမြန်ဆုံးထွက်ခွာလာကြဖို့… လေယာဥ် လွတ်လို့လာကြို သွားပါပြီ…